Posted by မန်းလေရူး at 5:47 PM2comments:
Posted by မန်းလေရူး at 10:44 PM No comments:
=> သကြားမပါသော သစ်သီးဖျော်ရည်တွေကို မသောက်ခဲ့တတ်သူ ....
=> ဆားမပါသော economic rice တွေကို မြိုမကျခဲ့သူ .....
=> ပူနွေးသော်လည်း ထမင်းကြမ်းကို လေသလပ်ထားသကဲ့သို့ မာကြောသော ထမင်းဆိုင်မှ ထမင်းနှင့် chicken rice ကို စားမဝင်ခဲ့သူ ...
=> Miso soup ကို သောက်ဖွယ်တစ်ခုလို့ပင် ခံစားလို့မရခဲ့သူ .....
=> အများတကာနှင့် တစ်ရင်းတစ်နှီးမဆိုထားနှင့် ... တစ်အိမ်ထဲနေသည့် အခြားအခန်းမှ အခန်းဖော်ကိုပင် သိပ်ပြီး အခေါ်အပြောမရှိသူ ...
=> စာနားမလည်သည့်တိုင် တစ်ယောက်ထဲ နားမလည် လည် အောင် ပေတေပြီးထိုင်ကြည့်နေတတ်သူ ....
=> မြန်မာအတန်းဖော်သူငယ်ချင်းမရှိပဲ တစ်နှစ်ပတ်လုံး လိုမှခေါ်သုံးတတ်သော စလုံးသူငယ်ချင်းများနှင့် လုံးချာပတ်ချာလိုက်ရင်း အထီးကျန်နေတတ်သူ ....
=>ကျောင်းမှာ တစ်ခြားမြန်မာတွေ အုပ်စုလိုက် ထမင်းစား Group Study လုပ်ရင် ခပ်လှမ်းလှမ်းမှ ငေးပြီး အမြဲအားကျနေတတ်သူ .....
=>when .... ? လို့ မေးရင် သူတို့တွေနားမလည်ဘူးဆိုတာ သိရက်နှင့်ပင် what time ...? ဟုဘယ်တော့မှ ပြင်မပြောတတ်ခဲ့သူ ...
=>ဆရာတွေကို စာမေးရင် ကိုယ်မေးချင်တာကို သူတို့ သဘောမပေါက်ရင် ဘယ်တော့မှ နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်မေးဖို့ မကြိုးစားတော့သူ ....
=> ကိုယ့်ရဲ့ english Accent ကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကူးရှိသော်လည်း များသောအားဖြင့် စကားပြောစရာသိပ်မရှိအောင် နေတတ်သူ ...
=>သူတို့ foreigner တွေပဲ တော်တော်နိုင်လွန်းတယ် လို့ပြောရင် စိတ်ထဲမှ အမြဲပြုံးမိနေသူ ....း)
=>သူ တရုတ်စကားနားမလည်ပါဘူးဆိုပြီး ပြောချင်ရာပြောတတ်သောသူတွေကိုလည်း သိ သိလျက်ပင် အမြဲလစ်လျူရှု့တတ်ခဲ့သူ ....
=> ထမင်းနှင့် သောက်စရာအပူတစ်ခုခု (သို့) ခေါက်ဆွဲတစ်မျိုးမျိုးနှင့်မှ မနက်စာကို အာသာပြေတတ်သူ
=> ကျောင်းကို ကားနှင့်လာပို့ လာကြိုလုပ်သူများကိုမြင်လျှင် စိတ်ထဲမှ အတိတ်ကာလတစ်ခုဆီကို တိတ်တိတ်ကလေး လွမ်းနေတတ်သူ ...
=> တစ်နေရာရာမှာ မိသားစုလိုက် သိုက်သိုက်ဝန်းဝန်းတွေ့လျှင် ကိုယ့်မိသားစုကိုလဲ ကိုယ့်ဘေးမှာ အမြဲရှိစေချင်ခဲ့သူ ....
=> သူများတွေ ရုပ်ရှင်မျိုးစုံကို အလုအယက်ကြည့်ချိန်မှာebook တွေ blogs တွေကို အငမ်းမရဖတ်နေတတ်သူ ....
=> ကျောင်းကို မြန်မြန်ပြီးလေ ကောင်းလေလို့ ထင်နေမိသူ ...
( အခုတော့ ကျောင်းတက်ရတဲ့ တစ်ရက် တစ်ရက်ဆိုတာ ကုန်သွားရင်
မသိမသာနှမြောနေမိပြန်တယ် ။ )
အခုတော့ နှစ်နှစ်နီးပါးဆိုတဲ့ အချိန်ကာလလေးအတွင်း ...
ပြောင်းလဲ့သင့်တာတွေလည်း ပြောင်းလဲလို့ လက်ရှိဘဝကို အေးအေးချမ်းချမ်းနေတတ်နေပါပြီ ။း) အစကတည်းက အဲသလို နေတတ်ခဲ့ရင် ဘယ်လောက်များကောင်းလိုက်မလဲနော် ။ ။ :~D
Posted by မန်းလေရူး at 10:23 PM No comments: